युरोपेली देश लुगा नलगाइ घर सफा गर्ने कामदार खोज्दै ,घन्टाको ७ हजार तलब ! – www.agnijwala.com
युरोपेली देश लुगा नलगाइ घर सफा गर्ने कामदार खोज्दै ,घन्टाको ७ हजार तलब !
एजेन्सी ,विश्वमा अनौठा किसिमका रोजगारीका अवसरहरु पाइने गरेका छन् । केहीले सुतेरै पैसा कमाउँछन् भने केहीले उभिएरै ।
अब बिदेशमा यस्ता कर्मचारीको मागमा वृद्दि भइरहेको छ कि जसले घरको सफाइ राम्रोसँग गरुन् । तर त्यसका लागि रोजगारी दिनेहरुको शर्त भने अनौठो खालको छ । उनीहरुले सफाई गर्ने युवा अथवा युवती नाङ्गै हुनुपर्ने शर्त राख्ने गरेका छन् । यसको कारण भने थाहा हुन सकेको छैन ।